महिलामाथि सिरिञ्ज आक्रमण, देश घाइते « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 11 July, 2019 2:00 pm
कुनैसमय शहरभरि आइएमविथनिर्मलाका आन्दोलनकारी भेटिन्थे, अचेल तिनीहरु कता छन् ? काभ्रेमा पनि हल्लाका भरमा एकैछिनमा जम्मा भएको त्यत्रो भिडले किन सिरिञ्ज आक्रमण भएनभएको बुझ्न चाहेन ? जमात कसरी समाजमा अराजक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ? हूलको शासनका पक्षमा किनजनमत बढिरहेको छ ?
पछिल्लो समय सिरिञ्ज आक्रमणका घटनालाई मिडियाले अरु आतंकित बनाइदिए । एक–एक युवतीमाथि सिरिञ्ज आक्रमण भयो भनेर कोलाहल मच्चाइयो । जनमानसमा त्रास छायो । युवती, किशोरी, महिला असुरक्षित भए भन्दै सरकारलाई धारे हात लगाउँदै गाली गरिए । जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूत दिन नसक्ने लाचार सरकार भन्दै सडक र सदनमा विरोधका आवाज पनि उठे । तर पनि सिरिञ्ज आक्रमण समाचार सुनेका नागरिकलाई काँडाले घोचे पनि सिरिञ्ज आक्रमणको आभास हुन थाल्यो । सिरिञ्ज आक्रमणका घटना यसभन्दा पहिले भएका थिएनन् । यो नेपालका लागि नयाँ घटना हो ।
केही समय पहिले ५ युवतीमाथि सिरिञ्ज आक्रमण भएको घटना सार्वजनिक भयो । एक युवकले बाटोमा हिँडिरहेकी युवतीलाई सिरिञ्ज घोचेर भाग्यो भनियो । प्रहरीमा अचानक आएको सूचनाले प्रहरीलाई एक्सनमा उत्रिन बाध्य बनायो । महाजगञ्जमा एक युवतीमाथि आक्रमण भएको सूचना आएसँगै डिएसपी होविन्द्र बोगटीको टोली घटनास्थलमा पुग्यो । युवती मरेँ, मरेँ भन्दै रोइरहेकी थिइन् ।
पाँचजना युवती आक्रमणमा परिसकेको जानकारी प्रहरीमा थियो । सोही अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सिरिञ्ज आक्रमण गरेको अभियोगमा रामेछापका ३० वर्षीय सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेका कार्कीले सिरिञ्ज हानेर किलाले घोचेको बयान दिए । उनीमाथि प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ । पीडित युवतीलाई शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुले औषधि चलाइरहेको छ । त्यसपछि काभ्रे, कीर्तिपुरमा पनि सिरिञ्ज आक्रमणका समाचार आए । त्यसले नागरिकलाई अरु त्रसित बनायो । किन सिरिञ्ज आक्रमणको बयान गरिरहेको होला यो मान्छे भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ । सिरिञ्ज आक्रमण भएको भए आक्रमणकारीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हो । निर्दोषले कष्ट भोग्ने होइन ।
सोमबारको कुरा हो । धुलिखेल जाने क्रममा सोही बसमा बनेपाकी एक युवतीले आफूलाई अर्की महिलाले सुई हानेको भन्दै विवाद गर्न थालिन् । बनेपामा रोकिएको गाडीमा विवाद हुन लागेपछि खगेन्द्र पाठक बसबाट ओर्लिए । उनी बस रोकेर विवाद बढ्न थालेपछि पैदल लम्कन बसबाट झरे । उनको ठूलीआमाको छोरोको अप्रेसन थियो धुलिखेल अस्पतालमा । बसमा विवाद हुन थालेपछि बसबाट निस्किएका पाठकमाथि सिरिञ्ज आक्रमण गरी भाग्न खोजेको भन्दै सबै उनीमाथि खनिए । त्यो भीडले खगेन्द्रलाई कुटपिट गर्यो । स्याङ्जाका खगेन्द्र मावि शिक्षक हुन् । उनी काठमाडौंमा लोकसेवाको तयारी गर्दै थिए । आफन्त भेट्न बनेपा जाँदै थिए । सिरिञ्ज आक्रमणको हल्लाले उनीमाथि सबै जाइलागे । भन्दै थिए, ‘मेरो गल्ती छैन । तर पनि उनीमाथि मुक्का प्रहार भइरह्यो ।
यसरी मैले गरेको छैन भन्दै गरेका खगेन्द्रले विना गल्ती कुटाइ मात्रै खाएनन् । उनले मानसिक तनाव पनि झेल्नुपर्यो । घटनापछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि पीडित मानिएकी युवतीले ती युवाले आफूमाथि आक्रमण नगरेको बताइन् । त्यसपछि प्रहरीले खगेन्द्रलाई छाडेको छ । पीडित भनिएकी महिलाले आशंका गरिएकी महिलालाई प्रहरीले समात्यो । अनुसन्धानका लागि टेकुमा पठाएर हेर्दा सिरिञ्ज आक्रमण नभएको पुष्टि भयो ।
सिरिञ्ज आक्रमण भयो भन्दै हिँड्ने ती महिलाले एकै छिन् सोचेको भए, निर्दोष खगेन्द्रले न मुक्का खानुपथ्र्यो । न पुलिसले उनलाई समात्थ्यो । गाडीमा चढेको अवस्थामा झुकिएर केही बस्तुले घोचेपछि त्यो सिरिञ्ज आक्रमण भन्दै हल्ला गर्दा निर्दोष स्याङ्जाका खगेन्द्रले मुक्का मात्रै खानु परेन मानसिक तनाव पनि झेल्नुपर्यो । तनावले मात्रै सीमित राखेन, मृत्युवरण गरुन्जेल यो घटनाले बिझाइरहने भयो ।
पछिल्लो समय काठमाडौं आसपासमा हल्ला गरिएको सिरिञ्ज आक्रमण समाजमा आतंक मच्चाउने र सरकारलाई कमजोर प्रयास पो हो कि ? हरेक महिना एउटा–एउटा बहाना बनाएर आतंक मच्चाउने काम अदृश्यरुपमा भइरहेको छ । कुनैसमय शहरभरि आइएमविथनिर्मलाका आन्दोलनकारी भेटिन्थे, अचेल तिनीहरु कता छन् ? काभ्रेमा पनि हल्लाका भरमा एकैछिनमा जम्मा भएको त्यत्रो भिडले किन सिरिञ्ज आक्रमण भएनभएको बुझ्न चाहेन ? जमात कसरी समाजमा अराजक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ? हूलको शासनका पक्षमा किनजनमत बढिरहेको छ ? राज्य कमजोर देखाउने अदृश्य शक्तिहरुले सिरिञ्ज महिलालाई होइन, कतै राज्यलाई पो हानिरहेको हो कि ? हामीले सोच्ने कि नसोच्ने यो कोणबाट ? (विमल, जनता समाचार डटकममा कार्यरत पत्रकार हुन्)